NOOCYADA UGU WANAAGSAN EE YAANYADA EE GOBOLKA LENINGRAD - BUUXINTA CAD
Ugu Weyn Ee Buuxinta cad
Tamaandhada gobolka Leningrad: sharaxaada noocyada ugu fiican
Iyada oo dhadhan fiican, yaanyada waxay sidoo kale leeyihiin bogsiinta guryaha.
Waxay caawiyaan dadka buka ee qaba hypertensive oo qaba cadaadis dhiig oo sarreeya, fitamiin B si ay u soo celiyaan nidaamka dareenka.
Sidoo kale, yaanyada ayaa hodan ku ah birta, zinc, potassium, magnesium, dhammaan walxaha muhiim u ah shaqaynta caafimaadka caadiga ah ee jidhka bini'aadamka.
Cimilada gobolka Leningrad waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah xilliga qaboobaha iyo xagaaga.
Tilmaamuhu waa cidhiidhiga cimilada: subaxda waxaa jiri kara qorrax dhalaalaya, galabtii - roobab diimeed, iyo fiidkii dabayl dabacsan. Taasina waa sababta ay jadeecadu u wajahday hawl adag: in la keeno noocyo noocyo ah oo yaanyo ah oo u adkeysanaya dabaysha, qoyaanka iyo isbedelka heerkulka.
Fasalka "buuxinta cad"
Wax soo saarka beeraha Kazakhstan. Kala duwan Tani waxay muddo dheer heshay caan ka mid ah bannaanka u, sida ay u qaadan kartaa xidid ku dhowaad xaalad kasta oo siiyaan goosashada mug leh.
Kalluumaysatayaasha ayaa la duubay dhirta kala duwan ee noocyadaas oo leh heerar sareeya caabbinta barafka, taas oo ka dhigi karta suurtogalnimada in ay korto jawiga aan deganayn sida gobolka Leningrad. Tamaandhada "buuxinta Caanaha" waxaa laga helaa mid cusub, caano, halsano, iskudhaf, iyo sidoo kale soo saaridda casiirka.
Xoortay geedi socodka, koraan ilaa 60 cm Kala duwan ayaa loo tixgeliyaa goor hore., tan iyo markii ay galaan fruiting in 90 - 100 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya muuqan. Haddii aad koraan geedo ee lagu koriyo ah, oo kaliya markaa ku darso instillation, ka dibna wakhtiga Bisaylkiisa waa la dhimayaa ilaa 85 - 90 maalmood. Iyadoo daryeel wanaagsan oo duurka ku saabsan 3 - 4 kg ee dhalidda ka mid ah dhirta, dabcan, waa la heli karaa.
Magaca noocyada kala duwan waxaa laga yaabaa in laga soo amaahdo noocyo kala duwan oo tufaax ah, maaddaama oo keliya miraha la sameeyay ayaa leh midab caan ah, sidaas oo kale tufaaxa.
Miraha bislaaday waxay ku wareegsan yihiin qaabka, mararka qaar waxoogaa hoos udhigmay xagga sare, casaan. Dheecaan, yaanyo kuwani waa siman, waxaa jira ribbada yar ee u dhow asliga ah. Miraha waa weyn, miisaanka ayaa gaari kara 150 g.
Kala duwanaanshahan waa mid caadi ah Bisaylka isku dhafan ee mirahakuwaas oo aan la jabin ka dib markii ay ka soo baxaan baadiyaha. Nasiib darro, kala duwanaanta noocaas ah waxay u nugul yahiin waxyeelada cudurada yaanyada, taas oo ay saameyn karto dillaac, kalluun cad, iyo sidoo kale cayayaanka carrada.
Geedka ugu wanaagsan ee duurka waxay noqon doonaan kuwo hodan, dhulal iftiin ah. Geedo dhirta ayaa si fiican loo qabtaa bilowgii bisha Abriil, qoto dheer ee saarista abuurka waa in ay ahaataa ugu yaraan 2 cm. Diidmada waa in la sameeyaa marka ay jiraan hal ama laba caleemo dhab ah oo geedo ah.
Seedling u baahan tahay quudinta si joogto ah, iyo adkeynta waa suurad wacan 10 maalmood ka hor laga beerto dhulka. Haddii la beero ayaa lagu qorsheynayaa dhul furan, ka dibna geedo waa inay ahaataa min 55 maalmood. Haddii aad qorsheyneyso inaad abuurto hoy ku yaal geedo, ka dibna geedo waxay noqon kartaa yar yar. Ku qallaji qaabka nidaamka 70x30 - 40 cm.
Maadaama ay duurka u yaryihiin, ma jiraan wax khaas ah oo daryeelkooda ah. Marka pasynkovanii u baahan tahay in laga saaro inta badan caleemaha lateral, sidaas darteed geedka ayaa ahaa stem si adag go'doomin. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la abuuro taageero dheeri ah oo loogu talagalay duurka qaabka trellis ah iyo saamiyada ku wareegsan baadiyaha. Waraabinta waa in la sameeyaa marar badan oo aan la helin, iyo biyo kulul. Inta lagu guda jiro muddada koritaanka iyo horumarka, waxaad u baahan tahay inaad sameyso 2 ilaa 3 dhaymo si aad warshadu u dhaqsooto si dhakhso ah oo si firfircoon u midhooto beerta furan ama koriyo.
Kala sooc "Agatha"
Kala duwan ayaa loo tixgeliyaa goor hore sababtoo ah waxay ku rareysaa 100 - 110 maalmood. Geedaha go'aamiyaha, hooseeya (illaa 45 cm ee dhererka), aan caadi ahayn. Laga soo bilaabo hal baadiyaha waxaa la ururin karaa 4 kg oo miro ah. Kala duwanaanta noocaan ah waxaa loo tixgeliyaa mid guud, sida ku haboon nooc kasta oo ciid ah.
Tamaandhada noocyo kala duwan oo casaan ah, wareega, wax yar oo sarreeya oo sare, oo gaadhaya 75 - 100 g miisaanka. Miro ayaa dhadhan macaanCabbir isku mid ah. Burushka wuxuu ka kooban yahay 3 ilaa 6 yaanyo.
Miraha ma jajabiyo, sidoo kale ha ka tegin. Dalag si fudud ayaa loo qaadi karaa iyada oo aan laga baqin in midhaha ay sii xumaanayso. Buundooyinka kala duwan ee noocaan ah waxaa saameeya cudurada, gaar ahaan, dabaylo goor dambe. Laakiin, sababtoo ah xaqiiqda ah in miraha si dhakhso ah u bislaadaan, phytophtora ma leeyihiin waqti si ay u waxyeelo weyn u dalagga.
Xaaladaha deegaanka Leningrad, midna kama boodi karo marxaladda geedo sii kordhaya, maaddaama abuurku aanu ku noolaan doonin cimilada isbeddelka ee gobolkan. Ma jiraan wax muujinaya qorshaha geedo sii kordhaya.
On mitir laba jibaaran waxaad dhali kartaa geedo 6 - 7. Ka dib markii la beero, geedo u baahan yihiin in la waraabiyo si badan oo ka tagay muddo 10 maalmood ah. Si dhirta ay u noolaato xaaladaha dhul furan, waxay ku filnaan doontaa inay hoy u noqoto, iyo bilawga maalmaha kulaylka iyo habeenkaba si joogto ah loo hirgeliyo.
Buundooyinka aad bay u hooseeyaan, Sidaa darteed, uma baahnid garaf si aad u yar. Waxaad xiri kartaa asliga ah kalluunka meel u dhow baadiyaha, laakiin tani waa in la sameeyaa markaad go'aansato. Waa suurad wacan in mulch ah ee ciidda, iyo sidoo kale loo xakameeyo. Labadan nidaam ayaa sida ugu fiican loo sameeyaa ka dib markaad waraabisid, marka qoyaanka uu gebi ahaanba dhulka ku jiro.
U hubso inaad ku toogato nooc ka mid ah ka takhalusi ma aha oo kaliya caleemaha aan loo baahnayn, laakiin sidoo kale caleemaha qaar ka dhigi kara midhaha. Dharka ugu sareeya iyo ilaalinta iyo sidoo kale dhammaan fasalada.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyada ugu wanaagsan ee yaanyada cherry.
Kala duwan "Yamal"
Kala duwan caan ah oo u dhexeeya bannaanka u ah gobollada waqooyiga. Ripens si dhakhso ah - in 80 - 85 maalmood ka dib caleemaha ugu horeeya. Sii wadaa inuu midho dhalo ilaa uu barafoobo.
Waxaa lagugula talinayaa beerista beerta furan, laakiin xaaladaha gobolka Leningrad waxay dareemayaan raaxo badan oo lagu koriyo.
Dhirta ayaa leh shtamb, celcelis ahaan aaladda, aad u hooseeya (illaa 35 cm). Miraha qaabka qaabeysan, casaan, yar yar oo loox ah. Ugu weyn wuxuu noqon doonaa midhaha miraha oo hore u kiciyey, qiyaasta soo gaari karto 200 g. Markaas miisaanka yaanyada ayaa hoos u dhigi doona ilaa 70 - 100 g.
Dhadiska ayaa lagu qiimeeyaa sida ugu fiican. Yamal waa noocyo aan la qabin oo u adkeysan kara la'aanta qoraxda iyo cimilada xun. Cadaadiska aan la ogaan karin ee dabaylo goor dambe ah.
Wax-soo-saarku waa celcelis ahaan ka sarreeya, iyo celcelis ahaan 5 kg halkii mitir. Si fiican u muujin lafteeda iyo cusub, iyo foomka qasacadaysan. Miraha ma sii xumaanayaan inta lagu jiro gaadiidka.
Iyada oo ay sabab u tahay xajmiga yar ee baadiyaha, kala duwanaanta noocaas ah ayaa lagu kori karaa xataa guryaha. Seeds waxaa lagu beeray si toos ah dhul furan bartamaha May, laakiin markaa waa in la daboolaa. Sidoo kale, ay duurka waxay ku habboon yihiin beeraha yaryar.
Haddii aad go'aansato in ay koraan geedo, ka dibna ma jiraan wax muuqaal ah ee geedi socodka. Qaabka beerto wuxuu caadi ahaan u yahay dhirta go'aamisa - halkii 1 sq. Meter waxaa la dhigi karaa geedo 6 - 7. Dhirta noocyada kala duwan waxaa lagula talinayaa in la beeray midka ugu horeeya si aad u hesho goosashada ugu dhakhsaha badan.
Maadaama ay kala duwan yihiin kuwa u adkeysanaya xaaladaha cimilada xun, waa wax aan qabyo ahayn. Sidaa darteed, dhirta kuwaas Looma baahna in la xiro iyo kor u kaca. Waraabinta joogtada ahi waxay noqon doontaa mid ku filan, iyo sidoo kale waqti dheer oo dheeri ah iyo daaweyn ka hortag ah ee cudurada.
Kala duwanaan "Gina"
Xeryahan ee noocyada kala duwan yihiin go'aan qaadashada, branching dhexdhexaad ah, dherer dhexdhexaad ah (ilaa 60 cm). Waxaa loo tixgeliyaa noocyo hore oo dhexdhexaad ah oo dalagga dalooshada ah, waxa uu ku soo boodaa 110 - 125 maalmood ka dib caleemaha kowaad ee geedo. Tamaandhada laftooda ayaa lagu soo koobay qaab dhismeedka, cufnaanta qaabdhismeedka, oo leh roogga yar, casaan.
Cabbirka midhaha waa mid aad u qosol badan, miisaanku wuxuu gaaraa 0.3 kg. Cuntada ayaa sarreeysa oo qiyaastii 10 kg oo ah miraha bislaaday 1 sq. Bannaanka ayaa u dabaaldegaan qaabdhismeed aad u fiican iyo dhadhanka midhaha, taas oo ah sababta noocaani dhowaan soo baxday ay si dhaqso ah u helayaan caan.
Xeryahan ee noocyada kala duwan kuma jiri doonaan phytophtoras iyo verticillous wilt. Sidoo kale, miraha waxaa lagu kaydin karaa waqti dheer goosashada ka dib, maadaama ay ku jiraan maadooyin badan oo qalalan, oo iyagu maaha biyuhu. Sida aagga isticmaalka, waa mid aad u ballaaran.
Yaanyada noocan oo kale ah oo caan ah ayaa ku habboon saladhyada, ee qurxinta suxuunta, waxay noqon doonaan kuwo la kariyey ama qasacadaysan.
Xeryahan ee kala duwan ee this waxaa la bilaabi karaa ma geedo, laakiin isla markiiba ka soo abuur. Laakiin noocan ah beerashada wuxuu ku habboon yahay oo kaliya meelaha diirran. Xaaladdan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in la koro geedo, kuwaas oo lagu dari karaa dhamaadka bisha Abriil, haddii wakhtigaas ma jiro baraf. 3 - 4 baadiyaha waxay xidid ka qaadi doonaan qayb ka mid ah aagga. Daryeelidda geedo kala duwan ee noocaan ah ma laha wax cakiran.
Dalagyada noocaan ah waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah. Sidaa darteed, si looga hortago kala goynta hordhaca qoyaanku maaha mid u qalma. Daaweynta ka hortagga ah ee ka yimaada cudurada waxay si buuxda u ilaalinayaan dhirta cudurada. Tan iyo duurka u yihiin hooseeyo, ma xiri karaan. Si looga fogaado nooc ka mid ah miro digir ah, waa inay duurka u noqdaan, iyo si joogto ah. Najiida iyo dabacsanaanta ciidda, iyo sidoo kale bacarinta, waa in ay ku jirtaa qorshaha daryeelka ee ku xoortay geedahaas.
Kala duwanaanshaha waxaa loo tixgeliyaa in ay ahaato mid degdeg ah, waxay leedahay waqti ay ku rusheeyso 80 - 100 maalmood. Duurka u yihiin qancin, stem, branchy dhexdhexaad ah, hooseeyo (ilaa 35 cm). Duufaankii ugu horreeyay waxaa la dhigaa caleemaha shanaad ama lixaad, ka dib marka isku xigta 2 inflorescences ayaa si adag loo dhisi doonaa iyada oo u dhaxaysa 1 caleen.
Tamaandhada kala duwan ee noocaan ah waa jaalaha, mararka qaarkood dahabi, wareega, yar yar (oo leh illaa 2.5 - 3 cm), miisaankeedu yahay ilaa 60 g, waxay leeyihiin dhadhan wanaagsan. Buundooyinka noocyada kala duwan ayaa waxyeelleyn kara phytophthora iyo macroporosis, laakiin waxay u adkeystaan ​​xaaladaha cimilada xun. Wax soo saarka wuxuu ka dhigayaa 4 - 6 kg oo yaanyo ah oo ka kooban 1 sq.m.
Miraha on duurka u bislaadaan ku dhowaad siman, sidaas phytophtora mararka qaarkood ma aha waqti si ay u waxyeeleeyaan dalagga. Sababtoo ah nidaamkan, foorishooyinka, burushyada ayaa sameeyay badan, halkan ka soo goosashada wanaagsan.
Heerka koowaad ee diyaarinta waxay noqon doontaa geedo sii kordhaya marka loo eego dhamaan sharciyada. Xiga - ku-tallaalid. Waqtiga uu barafku mar dambe ma noqon karo. Daryeelka geedo caadi ah. Sariiraha noocyo kala duwan waa in ay ahaataa wax yar oo sarreeya si ay caleemaha iyo miraha aaney u taaban dhulka. Qorshaha caadiga ah ee beerto - 60x50-40 cm. Waa suurad wacan in lagu beero dhul furan.
Sababtoo ah waxay ka soo horjeeda xaaladaha cimilada xun, noocyada kala duwan ee aan la qabin ee dayactirka. Uma baahnid inaad jeexjeexdo iyo googo. Waa suurad wacan in ay leeyihiin mulching badan oo soo noqnoqda ee ciidda, sidaas darteed waxaa jira lakabka u dhexeeya caleemaha baadiyaha iyo dhulka. Dhammaan qaybaha kale ee daryeelka ayaa isbeddelaya.
Kala saar "Ballad"
Kala duwanaansho cusub, ayaa loo sameeyay dhul daboolan, laakiin si fiican loo xaqiijiyay. Waxaa loo tixgeliyaa kala duwanaansho dhexdhexaad ah, oo ku soo boodda 110 - 115 maalmood. Bushes qiyaasaha, dherer dhexdhexaad ah, dherer dhexdhexaad ah (ilaa 50 cm).
Duufaankii ugu horeeyay wuxuu soo rogaa lixaad - caleen toddobaad. Tamaandhada ayaa wareegsan, wax yar ka dhigan on sare, siman, casaan midab, oo miisaankeedu yahay ilaa 150 g Miro ayaa leh dhadhan fiican. Mid ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee noocaani waa ku dhowaad siman Bisaylkiisa miraha.
Tamaandho waxay u dulqaadanayaan gaadiidka, waxayna sidoo kale sii wadi karaan tayadooda mudo dheer. Buundada kuma jiri doonto phytophthora, tubaakada sigaarka, iyo sidoo kale meel madow. Cuntada ayaa sarreeysa waxayna qiyaastii 9 kg halkii 1 sq.m. Qurxoon ma aha oo kaliya foomka cusub, laakiin sidoo kale in foomka qalabka ceeriin ee soo saaridda baastada iyo ketchup.
Habka seedling labadaba labadaba waa la isticmaali karaa oo aan la isticmaalin. Laakiin, haddii aadan koraan geedo horay, aqalka dhirta lagu koriyo, oo aad ku socoto inaad ku beerto abuurka, waa in aad u kululaato. Marka laga hadlayo habka seedling, wax walba waa heer: abuurka abuurka dabayaaqadii February, sii kordhaya oo daryeelaya geedo, transplanting dhul furan dabayaaqadii March - horraantii April.
Qaabka beereedku wuxuu u eg yahay geedo qulqulaya (7 - 9 dhirta halkii 1 sq. M.), More 50x40 cm.
Kala duwanaantu waa mid aad u macquulsan, sidaas darteed waxaad u baahan tahay daryeel haboon. Sidaa daraadeed, habka waraabinta looma dili karo, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u dabacdo, mulch iyo bacrimiya dhulka, iyo sidoo kale ilaalinta duurka ee leh fungicides. In lagu koriyo, qolka waa in si joogto ah u hawo si hawadu waa qalalan oo aan qoyan.
Haddii aad tahay ninkii beerta ka shaqaynayay ee gobolka Leningrad oo doonaya inuu kobciyo tamaandhadaada, ka dibna qayb ka mid ah shaqadaada, oo ah raadinta noocyo ku haboon, horeba waa la sameeyay. Kaliya iskuday, hel waayo-aragnimo, iyo, natiijada, dhalooyinka leh yaanyo qurux badan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Buuxinta cad 2019